दीपिकाको नयाँ लुक्स ‘छपाक’ यस्तो देखियो !
– एजेन्सी/ मेघना गुलजारको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म ‘छपाक’ को फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । पोस्टरमा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण प्रस्तुत छिन् । यो फिल्ममा उनी एसिड अट्याक सर्भाइभर लक्ष्मी अग्रवालको रोलमा देखिनेछिन् । दीपिकाको लुक्सले धेरैलाई निःशब्द बनाएको छ । ‘छपाक’ मा दीपिकाले आफ्नो करिअरको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाउन …
बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर नेपाली युवकसँग बिहे गर्दै
मुम्बई / बलिवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपुर अहिले ब्याटमिन्टन खेलाडी साइना नेह्वालको जीवनीमा आधारित फिल्म छोडेर चर्चामा रहेकी छन् । पछिल्लो समय रिलिज भएको फिल्म स्त्री सुपरहिट भएपछि श्रद्धाले दक्षिण भारतका सुपरस्टार बाहुबली फेम प्रभाससँग गरेको फिल्म साहो रिलिजको तयारीमा रहेको छ । केहि समय अगाडी अभिनेता फरहान अख्तरसँग अफयेर्समा रहेकी …
काठमाडौं । इजिप्टमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस इको इन्टरनेशनल २०१९’मा नेपालको प्रतिनिधित्व मुना गौचनले गर्ने भएकी छन् । आजैबाट सुरु हुने प्रतियोगिताका लागि उनी बिहान ८ बजे इजिप्ट तिर उडेकी हुन् । ६० देशका इको सुन्दरीहरुको सहभागीता रहने प्रतियोगिता लागि यो सिजनको उनी एक्लो प्रतिनिधि हुन् । नेपालका …
पललाई किन चाहियो तरण आदर्श ?
म्यूजिक भिडियो हुँदै फिल्म दुनियाँमा प्रवेश गरेका अभिनेता पल शाह फिल्म ‘शत्रु गते’ रिलिजको एक वर्षपछि पर्दामा फर्किँदैछन् । उनी अभिनीत नयाँ फिल्म ‘वीरविक्रम २’ आउँदो जेठ ३ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । यसका निर्देशक मिलन चाम्स हुन् । यो फिल्म रिलिजभन्दा अगाडि उनी ‘वितेका पल’ फेम निर्देशक सुरज सुब्बा …
‘क्याप्टेन’ की नायिकालाई ‘कबड्डी ३’ मा अफर !
तस्वीर – उपासना सि‌ंह ठकुरीको फेसबूकबाट काठमाडौं – फिल्म ‘क्याप्टेन’ बाट नेपाली रजतपटमा डेब्यु गरेकी नायिका उपासना सिंह ठकुरीले ‘कबड्डी ३’ बाट अफर आएको छ । चलचित्र ‘क्याप्टेन’ मा गाउँमा हुर्किएर काठमाडौं आएकी एक युवतीको भूमिका निभाएकी उपासनाको अभिनयको तारिफ भइरहेको छ । हलमा ‘क्याप्टेन’ चलिरहँदा ‘कबड्डी’ का लागि उपासनालाई …
एक्सन नायक निखिल उप्रेती दाङ आएर यस्तो भने
शिव पुन नेपाली सिनेमामा एक्सनका डेव्यु नायक निखिल उप्रेती पछिल्लो समयमा सिनेमा प्रति दर्शकको माग त्यति नभएको वताएका छन् । करिब २ दशक अगाडि फिल्म पिंजडामा सात तला माथिबाट हाम फालेर एकाएक चर्चामा आएका नायक निखिल उप्रेतीले नेपाली सिनेमा क्षेत्रका लागि दर्जन बढी सुपरहिट फिल्महरु दिइसकेका छन् ‘पिंजडा’को चर्चा र …
अवार्डमा यती बोल्ड उर्वशी
बलिउडमा नायिका उर्वशी रौटेलाको चर्चा अभिनयले भन्दा पनि हट अवतारले बढी हुन्छ । उर्वशीले अभिनय गरेको चलचित्र ‘ग्रेट ग्रान्ड मस्ती’ले खासै व्यापार गरेन । यसैले पनि उनलाई अहिले बलिउडमा टिक्न गाह्रो भैरहेको छ । उनै उर्वशी हालै मात्र मुम्बइमा आयोजना भएको ‘फिल्मफेयर ग्ल्यामर एन्ड स्टाइलिस अवार्ड’मा पुगिन् । अवार्ड समारोहमा …
बुलेट ‘राजा-रानी’ अनुप र वर्षा (ट्रेलर)
चैत १ गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको फिल्म ‘पुरानो बुलेट’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बुलेट बाइक चढ्ने एक युवकको जीवनमा आउने उतारचढावमा आधारित फिल्मको ट्रेलरमा कमेडी, एक्सन, प्रेम, रोमान्स, रोदन सबै समेटिएको छ । ट्रेलरमा धेरै हदसम्म कमर्शियल भ्यालु देखिएको छ । ‘ह्यान्डसम भिलेन’ को उपमा पाएका …
« अघिल्लो पृष्ठ 1 … 14 15 16